Inona no tsy tokony hohadinoinao ny andro alohan'ny hanombohana sambo fitsangantsanganana? | Fitsangatsanganana tanteraka
Arahabaina, handeha hanao sambo rahampitso ianao. Mieritreritra aho fa mitaintaina sy mientanentana be ianao, saingy ...Efa nandinika ve ianao fa efa vonona ny zava-drehetra? Manampy anao izahay hanao izany ao anatin'ny 5 minitra ary hiala sasatra tsara kokoa ianao.
Amin'izao fotoana izao dia manoro hevitra anao izahay mba hampidina ny rindranasan'ny orinasa raha mbola tsy nanao izany na mivantana jereo ny tranokala izany, raha sanatria nisy fiovana farany minitra. Tsy dia mahazatra loatra izany, tsy mitranga izany raha ny olan'ny sidina amin'ny seranam-piaramanidina, matetika ny fitsangantsanganana dia mahatoky amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo, fa raha nanapa-kevitra ny hanomboka ny fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny seranana hafa ianao fa tsy ilay manomboka ny làlana dia Azo atao na dia tsy azo inoana aza, araka ny nolazaiko taminao) fa nisy fiovana amin'ny zotra farany fandaharana na fanovana fandaharam-potoana. Noho izany Zahao ny tranokalan'ny orinasa na ny fampiharana azy, ao no hahitanao ny ora farany.
Ary izao, hodinihinay izao ny valizinao sy ny poketranao mba hanamafisana fa manana ny zavatra ilaina ianao.
1 Ireo antontan-taratasy izay tokony hojerenao
2 Izay tsy azonao adino ny mametraka ao anaty valizinao
La tahirin-kevitra inona no tokony hojerenao
Efa vitanao ve ny fisavana an-tserasera ny fitsangantsanganana an-tsambo? Ny orinasa rehetra dia efa manana an'io fitrangan-javatra io ary hitsitsy fotoana ianao rehefa mandeha. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ampidiro ny laharana famandrihana, ny anaranao sy ny anao farany araka ny hita amin'ny fanamafisana ny sambo. Raha ny fanazavana ihany, fantatro fa toa miharihary izany, saingy nanamafy ianao fa milamina ny pasipaoronao, sa tsy izany? Fantatro ny tranga misy vehivavy iray izay tsy afaka nandao ny dia manontolo ny sambo satria lany daty ny pasipaorony nandritra ny dia fotsiny, tsy nanana olana tamin'ny fidirana tany Espana indray izy, ary nahita fomba iray hafa tena mahaliana manao fitsangantsanganana, manararaotra ireo fotodrafitrasa , saingy eny tsy azony ireo fitsangatsanganana rehetra.
Ny mitondra lavitra indrindra photocopies an'ny rakitrao manokana, toy ny pasipaoro, antontan-taratasy famantarana ary indraindray, eny fa na ny carte de crédit aza. Ireo dia nanjary porofo raha sendra halatra na fatiantoka.
Tsy misy olona te-hieritreritra ny hampiasa ilay fiantohana fitsangantsanganana, Fa raha nanao fifanarahana iray na carte de crédit anao (ohatra) ianao dia mamporisika anao hanao antso amin'ny orinasa ianao ary hamafiso izay rakotra anao. Noho izany dia hahatsapa ho azo antoka kokoa ianao raha mila mampiasa azy io.
Antony ahazoana antoka fiantohana amin'ny sambo fitsangantsanganana
Vola eo an-toerana amin'ireo firenena hotsidihinao. Na dia ankehitriny aza dia mifindra be amin'ny karatra isika, indraindray raha hampiasa azy io dia mila mividy farafaharatsiny fividianana ianao, na tsy te-hanome sarany kafe tsotra aminy izy ireo, koa ento vola kely avy any amin'ireo firenena izay hitondran'ny sambo.
Izay tsy azonao adino ny mametraka ao anaty valizinao
Na dia ririnina aza izao rehefa manao fitsangantsanganana an-tsambo dia aza hadino ny sunscreen. Amin'ny ranomasina avo sy ny ranomasina dia ho maina ny hoditrao, koa makà tsara moisturizing ary tabilao masoandro tena tsara. Saika hamporisihinay ianao hitondra sambo kely ao anaty kitaponao, hanaovana fitsangatsanganana isan'andro, ary iray hafa ho an'ny rehefa manapa-kevitra ny hijanona ao anaty sambo ianao ary hankafy ny pisinina, ny fitsangatsanganana na ny tohatra eny ambony tokotanin-tsambo.
Ny zavatra iray tena ilaina dia ny mitondra ny sasany kiraro ahazoana aina. Ireo izay tena ahazoanao aina. Toy izany koa, aza adino ny mandro fitorianaSatria ny ankamaroan'ny sambo lehibe dia manana sauna sy dobo mafana, ary mahamenatra tokoa raha tsy afaka mankafy an'ireny fotodrafitrasa ireny ianao noho ny hadisoana adala toy izany.
Atsofohy ao anaty valizy kitapo na kitapo tsy misy banga, ho hitanao fa rehefa miverina ianao dia feno fahatsiarovana sy zavatra ary fanomezana. Tsy mitombina ny fanoherana ny fakam-panahy. Ary koa, ary imbetsaka isika tsy mieritreritra an'izany, dia tsara ny mandray roa salohy sofina, sanatria misy tabataba ao an-kabine izay tsy hamela anao hatory, na hamonjy anao amin'ny otitis ao amin'ny pisinina dia tsy fantatrao mihitsy.
Manantena izahay fa nanampy anao tamin'ireto toro-hevitra ireto, fa raha mbola te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fanomanana valizy tonga lafatra ianao dia kitiho eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » General » soso-kevitra » Inona no tsy tokony hohadinoinao ny andro alohan'ny fitsangantsanganana an-tsambo?
Izay rehetra azonao atao amin'ny fialamboly amin'ny sambo fitsangantsanganana